Safaarada Soomaaliya ee Cumaan oo War kasoo saartay geerida Danjire Xasan Maxamed – Radio Daljir
Agoosto 24, 2019 4:45 b 0
Safiirka dowladda Soomaaliya u fadhiya dalka Cumaan Danjire C/Wali Cali Axmed (Jeylaani), ayaa ka tacsiyadeeyay geeridii ku timid Ambassador Xasan Maxamed Siyaad oo hore u soo noqday Safiirka Soomaaliya ee Cumaan.
Danjire C/Wali Cali Axmed (Jeylaani),ayaa ku sifeeyay marxuumka qof wax badan u soo qabtay Qaranka, si gaar ah waxa uu ku amaanay shaqadii wanaagsaneyd ee uu ka qabtay Safaarada Soomaaliya ee dalka Cumaan.
“Jaaliyada Soomaaliyeed ee dalka Cumaan iyo Xukuumada wadankaasiba wey ka murugootay geerida Safiirkeenii qaaliga ahaa, waxaan Alle uga baryeynaa inuu janadiisa ka waraabiyo, Wuxuu ahaa qof baal dahaba ka geli doona howshii uu Wadanka u soo qabtay” ayuu yiri Danjire Jeylaani.
Waxa uu ugu danbeyn Tacsi u diray qoyskii iyo Qarankii uu ka geeriyooday marxuum Xasan Maxamed Siyaad Barre, isagoo Alle uga baryay inuu Janadiisa ku galadeysto.
“waxaan murugada ay dareemayaan la qeyb saneynaa Caruurtii, Hooyooyinkooda iyo Qoysaskii uu ka baxay Danjire Xasan Maxamed Siyaad, si gaar ah waxaan ugu tacsiyadeynayaa Reer Maxamed Siyaad Barre gaar ahaan Maslax, Ijaabo, Hodon, Diiriye, Ayaanle iyo Cosob” ayuu hadalkiisa ku soo xiray Safiirka Soomaaliya ee dalka Cumaan Danjire C/Wali Cali Axmed (Jeylaani).
Si kastabaa, Danjire Xasan Maxamed Siyaad Barre oo dhashay sanadii 1950-kii, ayaa duhurnimadii shalay oo Khamiis eheyd ku geeriyooday magaalada Masqad ee dalka Cummaan oo uu ku noolaa waayadii danbe, isagoona soo maamulay Safaarada Soomaaliya ee dalkaas intii u dhexeysay 2004 ilaa 2015-tii.